यसरी भयो रमेशको साथि जीवनको बिबाह धरानमा हेर्नुहोस Jeevan Bista Ramesh Prasai - Public 24Khabar
Home News यसरी भयो रमेशको साथि जीवनको बिबाह धरानमा हेर्नुहोस Jeevan Bista Ramesh Prasai
यसरी भयो रमेशको साथि जीवनको बिबाह धरानमा हेर्नुहोस Jeevan Bista Ramesh Prasai
यसरी भयो रमेशको साथि जीवनको बिबाह धरानमा हेर्नुहोस Jeevan Bista Ramesh Prasai married
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेतासँग प्रष्ट भनेका छन्, ‘मलाई अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीबाट भन्दा पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षीबाट समस्या छ । महाधिवेशनमा पराजितहरूले मोर्चाबन्दी गर्दा मलाई सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म कठिनाइ भइरहेको छ । मैले एकतापछि यो स्तरको परिस्थितिको कल्पना गरेको थिइनँ ।’
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको बिग्रँदो सम्बन्धले ओली पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका हुन् । तर, उनी अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाह्य मोर्चामा पनि घेराबन्दी पर्दै गएका छन् । राजनीतिक चालबाजीका खेलाडी ओलीमा नेकपाको घरझगडाले तनाव त थपेकै छ, विपक्षी दलदेखि पूर्वराजावादीसम्मको सडक आन्दोलन, जुलुसले अरु संकटको पनि निम्तो गरिरहेको छ ।
खासमा ओलीले पार्टीभित्रको कलहलाई चाहिँ २०७७ साल असोजदेखि आफैँले निम्ताे गरेका हुन् । २६ भदौलाई ‘कट अफ डेट’ मानेर दुई अध्यक्षबीच विवाद नगर्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको साता दिन नपुग्दै ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्री थप गर्न भ्याए ।
यी दुवै कार्यले घरझगडा साम्य भएन । बरु, कलह मुस्लो बनेर निस्कियो र अहिले दुई अध्यक्षबीच बोलचाल नै बन्द हुने परिस्थिति आइपुग्यो । र, पार्टीले अल्पमत र बहुमतको निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । जहाँ ओली पार्टीका हरेक मोर्चामा अल्पमतमा छन् । अर्थात् पार्टीभित्र उनी संकटले घेरिएका छन् ।
विश्लेषक अजयभद्र खनालको विश्लेषणमा अन्तरकलह मात्र होइन्, सरकार सम्हाल्न थालेको झन्डै तीन वर्षमा आफूले गरेका बाचा र नागरिकले गरेको विश्वासको उपलब्धि के भयो त ? त्यही प्रश्नले ओलीलाई थप घेराबन्दीमा पारेको देखिन्छ । खनाल भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा आफैँले सिर्जना गरेको घेराबन्दी पनि भन्न सकिन्छ ।’
पार्टीभित्रको मोर्चाबन्दीले निम्त्याएको संकट किनारा लाग्ने छाँट नदेखिँदै ओली प्रमुख प्रतिपक्षीको अर्को घेराबन्दीमा परेका छन् । आफूनिकटका नेतालाई हिजोअस्ति भनेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट समस्या नहुने परिस्थिति पनि बाँकी रहेन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल गिरफ्तार प्रकरणले । पौडेललाई गृहजिल्ला तनहुँमा गिरफ्तार गरियो, १७ मंसिरमा । पुल उद्घाटनका लागि जिल्ला पुगेका उनको गिरफ्तारीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सडकमा ओराल्ने काम मात्र भएन, सरकारको राजनीतिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाइदियो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘राजावादीहरूले मुख मिठ्याएर सडकतिर चियाइरहेको बेला सुतेको कांग्रेसलाई किन चलाउनुपरेको होला ? भित्रबाहिर, दायाँबायाँ एकै पटक कति मोर्चा खोल्न रहर लागेको होला ?’
संयोगचाँहि गत जेठमा सांसद अपहरण काण्डमा मुछिएका ओलीनिकट सांसद किसान श्रेष्ठ नै पौडेल प्रकरणमा जोडिए । सभापति शेरबहादुर देउवासँग बढ्दो सामीप्यले ओलीलाई कांग्रेसको सडक आन्दोलनले असर नपर्ला तर राजनीतिक प्रश्न नागरिक तहमा पनि उठाइदियो ।
Previous articleचीनले किन गाड्यो चन्द्रमामा राष्ट्रिय झण्डा ? कारण यस्तो, बनायो भयं’कर ठुलो योजना, यसरी गाड्यो झण्डा
Next articleअनिताको सबैभन्दा जो”खिम अप्रे’शन सफल हुदै !!! स्वास्थ्य लाभको हर्दिक सुभकामना (सहयोगकाे लागि एक सेयर गराै)